A ga-abawanye ebe ala a gbara mmiri na mpaghara Tambov - magazin "Potato System"
Na Tambov mpaghara ga-abawanye mpaghara ala ịgba mmiri
Na mpaghara Tambov, a na-arụ ọrụ iji mee ka mpaghara ala mmiri na-agba mmiri. N’afọ 2020, mpaghara a na-ezube inye ọrụ dị hekta 800 n ’ala ịgba mmiri.
Dabere na ngalaba ọrụ ugbo mpaghara, n'ime afọ atọ gara aga, a na-ewu ma na-enye ọrụ mgbochi mmiri dị ihe karịrị hekta 3 puku na Tambov na mpaghara Tambov dịka akụkụ nke mmemme ngalaba "Development of the Land reclamation Complex of Russia". A na-akọ poteto, ọka, soybeans, na beets na mpaghara mmiri.
N’afọ 2020, ndị na-emepụta ihe n’ubi na-eme atụmatụ inye hekita 800 nke ala a gbara mmiri mmiri. Otu n'ime ndị isi sonyere na mmepe nke ihe omume Land reclamation Complex of Russia program bụ Zolotaya Niva LLC, Belaya Dacha Farming LLC na Tambovagrofood LLC.
Dabere na Tambovmeliovodkhoz dị ka 01.01.2020, na mkpokọta na mpaghara Tambov ọ na-eme atụmatụ ịgba ala mmiri ihe karịrị hekta 8 nke ala ubi.
Tags: nduku na-etoogbugba mmiri n'ubiMpaghara Tambov
Mba EAEU kagburu iwu idobe iwu maka mbubata poteto, eyịm na karọt
Agrofirm KriMM na-ewetara Serbia mkpụrụ nduku
Ajụjụ HR. Kpaa nkata na telegram nke magazin ahụ